To: किन खर्च हुँदैन विकास बजेट?
आशिषभद्र खनाल - ठूला विकास निर्माणमा ठूला ठूला आर्थिक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी राष्ट्रिय हित सोचेर निर्णय लिँदा पनि कहिलेकाहीँ कुनै प्रक्रियामा अन्जानवश त्रुटि भए र अख्तियारको छानबिनमा परिए भ्रष्टाचारी भनेर आरोप लाग्ने भयले पनि राज्यको काममा जोखिम उठाउने व्यवस्थापक इञ्जिनियरहरूको कमी हुँदै गएको छ। विस्तृतमा
पोष्टबहादुर बस्नेत - पृथ्वीनारायण शाहलाई जुन कारणले हामी चिन्छौं, त्यो एउटा कथा मात्र पनि हुनसक्छ। तर, राष्ट्रियताको जग निर्माणका लागि त्यस्ता कथा जरुरी हुन्छ। प्रायः गरेर वास्तविकता र कल्पनाको मिश्रणका रूपमा त्यस्ता कथा निर्माण भएका हुन्छन्। राष्ट्रियता भनेको यस्तो भावना हो, जसका आधारमा आफूले नचिनेको र कहिल्यै नदेखेको मानिससँग समेत बन्धुत्व महशुस हुन्छ।
प्रा. सुदर्शनराज तिवारी - ‘डी’ ग्रेडमा परेको छ भन्दैमा सिंहदरबार भत्काइहाल्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न। किनकि, ग्रेड ‘डी’ को क्षति भएका संरचना जोगाउनै नसकिने भन्ने हुँदैन। अहिले हनुमानढोका दरबारको गद्दी बैठक पनि अमेरिकी सहयोगमा रेट्रोफिट हुन लागेको छ। त्यहाँको क्षति र सिंहदरबारको क्षति उस्तै हो। अझ सानो भए पनि गद्दी बैठकको समस्या सिंहदरबारको भन्दा जटिल छ। गद्दी बैठक रेट्रोफिट गर्न मिल्छ भने सिंहदरबार रेट्रोफिट गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन।
अमित ढकाल - नेपालमाथिको नाकाबन्दी भुल थियो भन्ने दिल्लीको अनुभूति प्रस्टै देखिन्छ। तर, नेपाली राजनीतिमा आफ्नो चलखेल कम गर्ने उसको कुनै मनसाय देखिन्न। संसदमा दर्ता संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन दिल्लीले यसपालि पनि पारदर्शी र अपारदर्शी चलखेल गर्यो भने त्यो सचेत नेपाली नागरिकका आँखाबाट लुक्ने छैन। त्यसले संविधान संशोधनको वैधता सिध्याउनेछ।
सञ्जीव पोखरेल - विगत १० वटा बर्खामा उर्लेका राजनीतिक भेलसँगै यतिबेला एमालेको सुधारवादी वा मध्यमार्गी भूमिका असान्दर्भिक बन्न गएको छ। सम्भवतः यसैकारण एमाले यतिबेला एउटा नयाँ चरित्रसहित राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो अलग स्थान जमाउन प्रयत्नशील छ। यो चरित्रलाई ऊ स्वयंले राष्ट्रवाद भनेर परिभाषित गरेको छ।
प्रदीप ज्ञवाली - अमितजीको विश्लेषण छ–भारतलाई नाकाबन्दीको गल्ती ‘रियलाइज’ भएको छ। यसो भएको भए धेरै राम्रो। तर तथ्यहरुले त्यसो देखाउँदैनन्। केपी ओलीको बहिर्गमनमा दिल्लीमा देखिएको राजनीतिक आतिसबाजी होस् या संशोधन विधेयक पारित गराउन भइरहेका भद्दा कुटनीतिक पहल– त्यो रियलाइजेशनको कुनै छेकछन्द नै छैन। बरु नेपालको राजनीति फेरि आफ्नै नियन्त्रणमा आयो र चीनको पोल्टाबाट नेपाललाई बाहिर निकालियो भन्ने दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति छन्।
– प्रत्यूष वन्त - विविध विषयबारे लेखिएका निबन्धहरूका संग्रह दीक्षितका चौथा खाले पुस्तक हुन्। यिनमा केही रोचक र लामा निबन्ध पाइन्छन्, तर केही भने सम्भवतः एउटा निबन्धलाई जे भनेर परिभाषित गरिन्छ त्यसमा नपर्न पनि सक्छन्। यो कुरा उहाँ स्वयंले पनि साइबर भानु (वि.सं. २०५७) को प्राक्कथनमा स्वीकार्नु भएको छ। उहाँको पुस्तक उखान मिलेन! (वि.सं. २०३७) यो प्रवर्गको शुरूआती पुस्तक हो भने उहाँको वि.सं. २०७० मा प्रकाशित कृति भात र पानी पनि यही प्रवर्गमा पर्छ। ‘नेति नेति’ को प्राक्कथनमा दीक्षितले नियोजित रूपमा र योजनाबद्ध ढंगले पुस्तक लेख्ने आफ्नो धैर्यता नभएको बताउनु भएको छ। त्यसैले, पछिल्ला तीन दशकमा उहाँले प्रकाशन गर्नु भएका धेरै पुस्तक चौथो प्रवर्गमा पर्छन्। उहाँसँग ती निबन्धलाई एकपछि अर्को गरेर बौद्धिक रूपमा सृजना गर्ने साधन थिए र अरू कसैको भर नपरी प्रकाशन गर्ने सुविधा पनि।
अमित ढकाल - ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको जमेर प्रतिरोध गरे। भारतको दादागिरीसामु उनी झुकेनन् मात्र हैन, नाकाबन्दी नहटुञ्जेल दिल्ली आउँदिन भनेर अडान राखे। चीनसँग दीर्घकालीन महत्वका सम्झौता गरे। यहाँसम्म अोलीको राष्ट्रियताको ‘प्लट’ सही थियो। सरकारबाट बाहिरिएपछि भने राष्ट्रियताको एउटा खराब प्लट सुरु भयो।
कनकमणि दीक्षित - अक्सर कृतिचोरहरू सक्षम बौद्धिक हुँदैनन् र यसै कारण उच्च पद हासिल गर्ने मौकै पाउँदैनन्, नेपालमा बाहेक। यहाँ भने राष्ट्रिय, केन्द्रीय विश्वविद्यालयको प्रमुख बनाइन्छन्। त्यति मात्र होइन, जब खनिया ‘प्लेजरिस्ट’ भएको सार्वजनिक छ, तैपनि उनको राजीनामाको माग न राजनीतिक वृत्तबाट आउँछ न त बौद्धिक क्षेत्र, नागरिक समाज वा विश्वविद्यालय स्वयंका प्राध्यापक, फ्याकल्टी र प्रशासनबाट। यस्तो अवस्थामा जनता स्वयंले खनियाको खतराबारे सचेत हुनुपर्ने हुन्छ।
डा.अर्जुन कार्की - जबसम्म चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस् चाहे गैह्री गाउँको रामबहादुर सार्की होस् बिरामी परेपछि उपचारको पद्धतिमा उसको पनि पहुँच, उसको पनि हक, उसको पनि अकाल मृत्यु हुनबाट जोगिने र अनावश्यक पीडाबाट गुज्रिराख्नु नपर्ने परिस्थितिको सुनिश्चित गर्न सक्दैनौं, तबसम्म यो विभेद कायम रहन्छ। यस्तो विभेद अन्त्य गर्नको लागि आम नागरिक जागरुक भएर आफ्नो अधिकारको रक्षाका लागि सामुहिक रुपको आवाज उठाउने खालको जाँगर,प्रयत्न, निरन्तरता भएन भने यी विभेद टुंगिने छैनन्।
जीवन क्षेत्री - अबचाहिं बिग्रनबाट रोक्ने मात्र हैन कि धेरै र दुरगामी महत्वका सुधारको बाटो अब खुलेको छ । आइओएमको डिन नियुक्तिमा दलीय भागवण्डा रोक भनेर शुरु भएको आन्दोलन देशका सबै उच्च शिक्षालयहरुमा हुने नियुक्तिहरुमा दलीयकरण रोक्ने र ती संस्थाहरुलाई भविष्यमुखी बनाउन संरचनागत सुधार गर्ने व्यवस्थासम्म आइपुग्नु चानचुने कुरा हैन । यो प्रक्रियामा पनि जित्नेसँगै हार्ने पक्षहरु हुनेछन् र पाइलापाइलामा अवरोधहरु सिर्जना हुनेछन् ।
अमित ढकाल - भोलि माइतिघर–बानेश्वर मार्चमा उपस्थित भएर एउटा सशक्त नागरिक समाज उदयको सन्देश दिने अवसर हामीलाई उपलब्ध छ। यो मुलुकलाई तहसनहस गर्ने गरी क्यान्सरका रूपमा स्थापित राजनीतिक भागबन्डा हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देश दिने अवसर छ। राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हाम्रा संस्थाहरू तहसनहस पार्ने परिपाटी अन्त्यको सुरुआत गर्ने हामीलाई अवसर छ।
शेखर खरेल - डाक्टर गोविन्द केसी भन्छन्, ‘नेताहरू हुन् कि माफिया, म छुट्याउनै सक्दिनँ।’ चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राखेर डा केसीले थालेको दसौं पटककको आमरण अनसन आज २०औं दिनमा आइपुग्दासम्म पनि राज्यले नसुनेको देख्दा प्रश्न उठ्छ, हामी जसलाई नेता भन्छौं असलमा ती नेता हुन वा माफिया?
केकी अधिकारी - कहिलेकाहीँ सोच्छु, डा. केसीजस्तो म किन पागल भइनँ! अर्थात्, उनको जस्तो पागल सोच ममा किन पलाएन? जब–जब उनका कुरा सुन्छु, पढ्छु, हेर्छु, दिमागमा यसै–यसै विचार आइदिन्छन्, म पनि पागल भैदिए! अनि, मजस्तै अरु थुप्रै पागल थपिए! कामना गर्न थाल्दो रहेछु, ममा पनि डा. केसी सोच भरिदेउ भगवान! यदि यस्तो हुन्थ्यो भने, स्वास्थ्य उपचार नपाएर कोही अकालमै मर्नु पर्ने थिएन। अनि आफैं उपचार गर्न सक्नेलेचाहीँ उपचारका नाममा राज्यको ढुकुटीमाथि मोजमस्ती गर्न पाउने थिएन।
नारायण वाग्ले - प्रधानमन्त्री दाहाल बस चढेर सायदै सिंहदरबार पुगेका हुँदा हुन्। युवाकालदेखि भूमिगत बसेका, हेलिकप्टरबाट पदार्पण भएर खुला जीवनमा पसेका र त्यसयता राज्यका सबै सुविधा आकण्ठ उपभोग गर्न पाएका उनले बस चढ्न तयार भएको जानकारी आफैँमा समाचारजन्य थियो। ...प्रधानमन्त्री मञ्चमा बसुञ्जेल समय हेर्न घरिघरि नाडी तेस्र्याउने गर्दैथिए। संविधान संशोधन प्रस्तावको पहलमाझ धन्य त्यहाँ आइपुगे भन्ने लागिरहेको थियो। उनले उद्घाटन सम्बोधनमा भने, ‘कुनै बेला साझा बसको टिकट पाउनु भनेको हेलिकप्टरमा चढ्न पाउनुजस्तै लाग्थ्यो हामीलाई।’...उनलाई त्यस्तो लाग्दो रहेछ, जतिखेर उनमा संसार बदल्ने सपना थियो। भूमिगत हुँदा देश बनाउने कत्रो उत्कण्ठा हुँदो हो, देश बनाउने मौका आएपछि भने उनको सपनान्तर भयो। राजनीतिमा टिक्ने एकसूत्रीय सपना मात्र बाँकी रहेको हविगतमा नत्र किन देखिन पुग्थे र?
बुद्धिसागर - यो देशमा जसले जे जे पाएका छन्, जसले आफ्नो ठूलो साम्राज्य र चुनावमा चाहिने बूढीऔलाहरूको लस्कर खडा गरेका छन्, ती कहिल्यै भोको बसेका छैनन्। तिनलाई खानमा रुचि छ, ख्वाउनमा रुचि छ। खानपानको टेबुलमा यहाँ धेरै ठूला निर्णय भएका छन्। खानपानकै टेबुलमा भिजिटिङ कार्डहरू साटासाट भएका छन्। इतिहास नै यस्तो छ। समय नै यस्तो छ। यस्तो बेला एउटा डाक्टर बूढोले नखाएर के हुन्छ? र, मलाई डाक्टर बूढोको माया झन् लाग्छ।
प्रत्यूष वन्त - डिन नियुक्तिमा वरिष्ठताको मागले हाम्रो वर्तमान बुझ्न झ्यालको काम गर्छ। पक्कै पनि प्राध्यापक कहिले बन्यो भनेर मिति हेरेर डिन तोक्ने चलन संसारका थुप्रै राम्रा विश्वविद्यालयमा छैन। तर, हामीकहाँ राजनीतिक पार्टीहरूको संरक्षणमा विश्वविद्यालयभित्र हुने चलखेल छ। डा. केसीले यही बुझेर डिन नियुक्तिमा मनपरितन्त्र हुनुहुँदैन भन्नुभएको हो।
डा. अर्जुन कार्की - केसी १० औं पटक अनसन बसेको आज १९ औं दिन भइसक्यो। उहाँको स्वास्थ्य जटिल बनिरहेको छ। सरकार यसअघि पनि अवस्था जटिल बनेपछि मात्रै उहाँको अनसनमा चासो दिने गर्थ्यो। सुरुमा वास्ता नगर्ने, अन्तिम समयमा आएर उहाँसँग पूरा गर्न सकिने/नसकिने सहमति गर्ने सरकारको चलनै भइसक्यो। सरकार केसीसँग सहमति त गर्छ तर ती सहमतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी कहिल्यै निर्वाह गर्दैन। यो क्रम दोहोरिरहेको छ।
सरुभक्त - हामी धेरै आन्दोलन पार गरेर अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हौं। यत्रो प्रयासबाट नयाँ संविधान बनिसक्दा पनि अझै पुरानै कालखण्ड सम्झाउने गरी एउटा डाक्टरले भ्रष्टाचारको कुरा उठाएर अनसन बसिराख्नुपर्ने असाध्यै लाजमर्दो हो।
नयनराज पाण्डे - मेरो सरकार त गोविन्द केसीको मृत्यु कुरिरहेछ। भावुकता नै सही, म मेरो आँशु लतपतिएका यी शब्दमार्फत् सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु– तिमीसम्म आवाज पुग्न कतिवटा गोविन्द केसीले चिच्याउनुपर्छ, कतिवटा गोविन्द केसीले अनसन बस्नुपर्छ? कतिवटा गोविन्द केसी मर्नु पर्छ? सरकार, के त्यो मृत्युको कुनै लगत हुनेछ तिमीसित? किनभने, समयले एक न एकदिन तिमीसित हिसाब त माग्ने नै छ।
यादव खरेल - स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएका जति विकृति छन्, त्यसको समाधान खोज्ने क्रममा केसी पटक पटक अनसन बस्नुभएको छ। यस्ता हरेक अनसनपछि सरकारसँग वार्ता पनि हुन्छ। तर, त्यसको कुनै निश्कर्ष देखिँदैन। पालनै हुँदैन। बरु उल्टो विविध किसिमका विकृतिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेर आक्रान्त बनाउँदै लगिरहेको छ।
राजेश हमाल - हाम्रो लागि निस्वार्थ भावले लडिरहनुभएका मान्छेको स्वास्थ्यमा थपिएको चुनौती हामी सबैका लागि चिन्ताको विषय हो र हुनुपर्छ। समय आइसक्यो, डा. केसीले उठाउनुभएका मागमा दबाब सिर्जना गर्न हामी सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट आवाज उठाउनैपर्छ। सरकारले पनि के कुरामा विचार पुर्याउनु जरुरी छ भने, डा. केसीको ज्यान तलमाथि भएको खण्डमा उहाँका समर्थक र जनतालाई संयम राख्न गाह्रो हुनेछ।
केदार शर्मा - अनसनले कमजोर बनाउँदै लगेको स्वरमा स्पष्टसँग डा. गोविन्द केसीले भन्नुभयो, 'अनसन नबसेका बेला मेरो ध्यान विषयवस्तुका मुख्य मुख्य पक्षहरूमा हुन्छ। तर जब म अनसनमा हुन्छु, आफूले पचहत्तरै जिल्ला घुमेर अनुभव गरेका कुराहरू मनमा खेल्न थाल्छन्। त्यहाँका वास्तविकताबारे धेरै कुरा थाहा भएकाले मलाई झनै चित्त बुझ्दैन, केही गरे पनि चित्त बुझाउने ठाउँ पाउँदिन। अनि त्यस्तो अव्यवस्था र अन्यायपूर्ण परिस्थिति परिवर्तन गर्न आफूले निर्वाह गर्नसक्ने जिम्मेवारीको बोध अझ बढ्छ। त्यसले मलाई ऊर्जा दिन्छ।'
केदारभक्त माथेमा - राज्य चलाउने मान्छेले एउटा सत्याग्रहीको कुरा बुझ्दै बुझ्दैन। गान्धी पनि उतिबेला राज्यको निम्ति अप्ठेरो नै बनेका थिए। उनी एकथोक कुरा उठाइदिन्थे, मुलुक चलाउनेहरूलाई बुझाउनै गाह्रो। नैतिक बल उच्च भएकाले तिनै गान्धी एकपटक अडेर बसेपछि बस्याबस्यै हुन्थे र अरूहरूको पनि समर्थन पाउँथे। हाम्रो सन्दर्भमा गोविन्द केसीको कुरा पनि त्यस्तै हो।
कनकमणि दीक्षित - जनताको रखवारी गर्न अग्रसर डा. गोविन्द केसीको ज्यानको जिम्मा खनियाजस्तो पात्रको हत्केलामा पुगेको छ। यो क्रूर छ र मान्य छैन। डा. केसीको ज्यान गए त्यो मरण होइन, हत्या हुनेछ र कसूरदार हुनेछन्– सरकारमा रहेका, नरहेका सबै पार्टीका सबै मुखबन्द नेता/कार्यकर्ता।
हुँदैन बन्दैन भन्छन् चुपचाप सहेर भाग्नेहरूखाली गफै मात्र चुट्छन्बेइमानी घातीहरूयो देश अवश्य बन्छ भन्छन्अँध्यारोमा उज्यालो खोज्नेहरू
चैतन्य मिश्र - डा. गोविन्द केसी सत्याग्रहका क्रममा आज १७ औं दिनको आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ। सत्यको पक्षमा निष्काम रूपले ज्यान हत्केलामा राखेर एक्लै ठिंग उभिएका यस्ता जोदाहा नागरिक र निष्ठावान पेसाकर्मीको जीवनमा तलमाथि पर्न गए त्यसलाई कुनै पनि परिभाषाअन्तर्गत स्वाभाविक र स्वैच्छिक अशक्तता वा मृत्यु मान्न सकिने छैन। त्यस्तो अवस्था आइपरे प्रधानमन्त्री र मन्त्री, सांसद, राजनीतिक दल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सबैले जानीजानी र देखादेखी अशक्तता वा मृत्युवरण गर्न दिएको दबाब मान्नुपर्ने हुन्छ।
मुराहरि पराजुली - क्यास्ट्रोको सनकलाई कल्पनाशीलता मान्ने, उनको दम्भलाई गौरव मान्ने, उनले गरेका दमनलाई नजरअन्दाज गर्दै महान नेताको पगरी गुथाउने गल्ती हामीले गर्न हुँदैन। उनलाई महान भन्ने हो भने महानताको परिभाषा फेर्नुपर्छ। आफूले मस्ती गरेर जनतालाई सास्ती दिने सबै ठालुहरूलाई महान नेता भन्नुपर्छ।
गजेन्द्र बुढाथोकी - भर्खरै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय उद्यमी योगी रामदेवको प्रत्यक्ष लगानी रहेको भनिएको पतञ्जली आयुर्वेद प्रालिको उद्घाटन गरिन्। योगगुरु रामदेवले काठमाडौं ओर्लिनेबित्तिकै उक्त उद्योगमा आफूले हालसम्म १०० करोड (१ अर्ब भारु) लगानी गरिसकेको दाबी गरेका थिए। तर, उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का लागि स्वीकृति नै नलिइएको खुलेपछि हतारहतार रामदेवले आफूले लगानी गर्ने योजना मात्र बनाइरहेको विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। Comments